Windows 8 ကို password ပေးမယ် | အိမ့်မှူးသော်
အဆင့်(၃) နောက် screen တစ်ခုမှာ Users ကိုရွေးပေးပြီ Createapassword ကို ကလစ်ပေးပါ။
အဆင့်(၄) နောက်တစ်ခုမှာ password ပေးပါ။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားရပ့ါမယ်။ နောက်ဆုံးအကွက်မှာက အပေါ်က ပေးထားတဲ့ password ကို ပြန်ရိုက်လို့မရပါဘူး ။ သူက လှည့်ကွက်ပေ့ါဗျာ။ Password hint ဆိုပေ့မယ့်။ ယောင်ပြ hint တာဖြစ်ပါတယ်။ new password နဲ့ password hint က တူလို့မရပါဘူး။ ပြီးရင် Next ကို နှိပ်ပါ။ ဒါက windows 8 မှာ security တစ်ခုမြှင့်လိုက်တာပါ။ password မသိတဲ့သူတစ်ယောက်လာဖွင့်ပြီဆိုရင် wrong password ပြပြီးတော့ hint password ကိုပြထားပါတယ်။ hint password ဆိုတာက အတုကြီးလေ ဘယ်လိုမှဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့။
အဆင့်(၅) ပြီးရင် Finish ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။
BoKate 9:55 AM
ဟိုင်း အစ်ကို ဝင်းဒိုး 8 မှာ မြန်မာfont မပေါ်လို့ပါ ကျနော်လုပ်ကြည့်လို့လဲမရလို့ပါအစ်ကို နည်းလမ်းလေးသိရင် ပြောပြပါအစ်ကို
My website - http://sangkritgurukul.asia/
Your post offers establiѕheԁ useful to uѕ.
It’s extremely informative and you aге obvіοusly quitе knowlеdgeable in
thіs region. Υou get exposed ouг sight in oгder to numerous opinion of this
specifіc subjеct with іnterestіng